I-china Hot sale Hme filter anesthesia kunye nenkqubo yokuphefumla mveliso kunye nabathengisi | Biotek
Iifilitha zokufudumeza ubushushu kunye nokufuma zenzelwe ukubuyisela endaweni ukufudumeza okuqhelekileyo, ukuthomalalisa kunye nokucoca imisebenzi yomoya ophezulu xa ezi zakhiwo zigqithile ngexesha lokudinwa kunye nokunyanyekelwa kakhulu.
Ikhowudi yemveliso: BOT 111000
Yesicelo: esetyenziselwa ukuhluza amasuntswana ngaphakathi emoyeni umoya ngomatshini wokubulala kunye nomatshini wokuphefumla.
Uhlobo: Iqonde kwaye iAngled
Imodeli: Abantu abadala kunye nabantwana
1. Izinto ezikumgangatho ophezulu wezonyango kwigobolondo yangaphandle;
2. Ukucoca ngokucocekileyo kunye nophakathi
3. Ukutywinwa kakuhle, ukunganyangeki kokuphefumla okuphantsi kunye nendawo encinci efileyo;
4. Ukulungele ukuphefumla kunye noomatshini be-anesthesia nge-brand eyahlukileyo;
5. Ukusetyenziselwa into enye kuphela, ukunqanda ukusuleleka kwizifo.
I-6: Inokudityaniswa kuzo zonke iintlobo zetyhubhu eyenzelwe i-ISO.
7. ukumelana Ukuphefumla Phantsi.
8. Vimba amasuntswana, iintsholongwane kunye nezinye izifo kwi-anesthesia kunye nokuphefumla kwesekethe ukungena kwinkqubo yokuphefumla.
9: Akukho sidingo sokufudumeza kunye nokufuma.
10. Yandisa isangqa sobomi.
11. I-Luer Port kunye neKapa.
Isampuli 12.Free zinokubonelelwa
Ubushushu lokufuma Ubushushu lokucoca ulwelo (HMEF)
Umvelisi weHME Filter
I-CE kunye ne-ISO13485 ziqinisekisiwe
Ulawulo loMgangatho olungileyo kunye neXabiso eliVuselelekayo
Egqithileyo Ukwandiswa Ukuphefumla kweSekethe yokujikeleza i-Catheter Mount
Okulandelayo: Ihowuliseyili I-PVC yohlobo lwe-Anesthesia Mask ethengiswayo